ဓမ္မပန်းခင်း: အသွင်သဏ္ဌာန် နှင့် အနှစ်သာရ
အသွင်သဏ္ဌာန် နှင့် အနှစ်သာရ
Posted by kelartha on Wednesday, October 5, 2011 / Labels: အသွင်သဏ္ဌာန် နှင့် အနှစ်သာရ
အိန္ဒိယနိုင်ငံ ဗုဒ္ဓ္ဓ္ဓဂါယာမှာ ကျောင်းသားကျောင်းဆိုတာ ရှိပါတယ်.. မြန်မာပြည်ကနေ အိန္ဒိယကိုစာလာ
သင်ကြတဲ့ စာသင်သားရဟန်းတော်များရဲ့ အမေ့အိမ်သဖွယ် ချစ်ခင်တွယ်တာ နားခိုအိပ်စက် ပျော်မွေ့ရာ တသက်တာ မမေ့ရက်စရာတွေနဲ့ တသသ သတိရနေရမယ့် ကျောင်းတော်ကြီးပါ.. တစ်နေ့ ဆွမ်းချက်အလှည့်
ကျလို့ မီးဖိုခန်းထဲမှာ ဟင်းချက်ဖို့ အထုပ်တစ်ထုပ်ကိုဖောက်ခါနီး အလှူရှင်စာတန်းလေး တွေ့လို့ ဖတ်ကြည့်မိပါ
တယ်.. နာမည်တွေ လိပ်စာတွေမမှတ်မိတော့ပေမယ့် ဤကောင်းမှုကြောင့် မိသားစုလိုက် ဗုဒ္ဓ္ဓ္ဓဂါယာသို့ဘုရားဖူး
လာရပါလို၏ဘုရား ဆိုတဲ့ဆုတောင်းလေးကြောင့် ရင်ထဲမှာ နင့်ကနဲဖြစ်မိပါတယ်.. ပြီးတော့လည်း မိုင် 1800 ကျော်ရှိတဲ့ ဘုရားဖူးခရီးစဉ်ကို ကိုယ်တိုင်သွားဖူးသူတစ်ယောက်အနေနဲ့ တွေ့ကြုံ ခံစားခဲ့ရတဲ့ ဆွတ်ပျံ့လွမ်း မောဖွယ် ကြေကွဲဝမ်းနည်းဖွယ် ၀မ်းသာအားတက်ဖွယ် အသွင်သဏ္ဌာန်ပိုင်းဆိုင်ရာမြင်ကွင်းတွေနဲ့ အနှစ်သာရ ပိုင်းဆိုင်ရာ လေးနက်မှုအတွေးတွေလည်း စိတ်ထဲမှာ ပေါ်လာမိပါတယ်…
ဘုရားအလောင်းတော်ကို မဟာသက္ကရာဇ် ၆၈ ခုနှစ် ကဆုန်လပြည့် သောကြာနေ့ (B.C 623 May) မှာ
ကပိလ၀တ်ပြည် နှင့် ဒေ၀ဒဟပြည်အကြားရှိ လုမ္ဗိနီဥယျာဉ်မှာ မယ်တော်သည် မတ်တတ်ရပ်လျှက် သားတော် လည်း သတိရှိလျှက် မျက်လုံးပွင့်လျှက် လက်ဖ၀ါးတို့ကိုဖြန့်လျှက် ခြေတို့ကိုဆန့်လျှက် အညစ်အကြေးကင်းစွာ ဖြင့် ခြေမှစ၍ မယ်တော်ရော သားတော်ပါ ချမ်းချမ်းသာသာ ဖွားမြင်ခဲ့ပါတယ်.. ဒီကမ္ဘာအစ မဟာသမ္မတမင်း သည် သိဒ္ဓတ္ထမင်းသားပင်ဖြစ်ခဲ့၍ မဟာသမ္မတမင်းမျိုးဆက်မှာပင် ပြန်လည်ဖွားမြင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်.. မဟာ သမ္မတမင်းမှသည် အလောင်းတော်ဖွားမြင်သည်အထိ မင်းဆက်ပေါင်း (334569 ) သုံးသိန်း သုံးသောင်း လေး ထောင့်ငါးရာ ခြောက်ဆယ့်ကိုးဆက်ရှိပြီး တခြားသွေးမရောနှောသော အသမ္ဘိန္နခတ္တိယ မင်းမျိုးဆက်မှာ ဖွားမြင် ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်.. ဖွားမြင်ချိန်မှာ မယ်တော့် အသက် 57 နှစ်ထဲမှာဖြစ်ပြီး နောက် ခုနစ်ရက်အကြာမှာ နတ်ရွာစံခဲ့ပါတယ်..အလောင်းတော် ပဋိသန္ဓေနေခဲ့ဖူး သောမိခင်သည် ပရိဘောဂစေတီထိုက်၍ မည်သည့်အမျိုးသားမှ သုံးဆောင်ခံစားခြင်းငှာမထိုက်သလို နောက်ထပ်ပဋိသန္ဓေနေခြင်းငှာလည်း မထိုက်တန်တော့ပါဘူး.. မယ်တော့်အသက် 10 လနဲ့7ရက်အကျန်မှာ အလောင်းတော် ပဋိသန္ဓေနေခဲ့တာဖြစ်လို့ မွေးဖွားရခြင်းကြောင့် နတ်ရွာစံခဲ့ရတာမဟုတ်ဘဲ ဓမ္မတာအရ သက် တမ်းစေ့ သက်တမ်းကုန်လို့သာ မယ်တော် နတ်ရွာစံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်..
ဖွားမြင်လာသောအလောင်းတော်ကို ဗြဟ္မာကြီးလေးဦးတို့က ရွှေဇာကွန်ရက်၊ စာတုမဟာရာဇ် နတ်မင်းကြီးလေးဦးတို့က သစ်နက်ရေ၊ လူတို့က ဘွဲ့ဖြူပုဆိုးတို့ဖြင့် အဆင့်ဆင့်ခံယူကြပြီး အလောင်းတော် သည် လူတို့လက်မှ ဆင်းသက်ကာ အရပ်ဆယ်မျက်နှာမှာ မိမိနှင့်တူသူ ရှိ မရှိ ကြည့်ရှုတော်မူပြီး မြောက်အရပ် သို့ ရှေ့ရှုကာ ခြေလှမ်း ခုနစ်လှမ်းလှမ်း၍ “ လောကမှာ ငါအမြတ်ဆုံး၊ အကြီးဆုံး၊ အချီးမွမ်းအပ်ဆုံး၊ ယခုပဋိသန္ဓေသည် နောက်ဆုံးပဋိသန္ဓေဖြစ်၍ ငါ့မှာ နောက်ဘ၀မရှိတော့ ” ဟု ရဲရဲတော် စကားကြီးငါးခွန်းကို ကြွေးကြော်ခဲ့ပါတယ်.. အလောင်းတော်သည် ပကတိမြေကြီးပေါ်မှာ ဖွားသည့်အတိုင်း အ၀တ်ဗလာ ကြွလှမ်း သည်ကို မဟာဗြဟ္မာကြီးက ထီးဖြူမိုး၍ သုယာမနတ်မင်းက သားမြီးယပ်ကိုင်ဆောင်၍ နတ်များက မင်းမြှောက် တန်ဆာများကိုင်ဆောင်၍ လိုက်ပါခဲ့ပါတယ်.. လူတို့အမြင်မှာတော့ အလောင်းတော်ကို အ၀တ်အစားအပြည့် အစုံဖြင့် ဆယ့်ခြောက်နှစ်သားအရွယ် ကောင်းကင်၌ ကြွလှမ်းသည်ကို ဖူးမြင်ရပါတယ်..
လုမ္ဗိနီကို ယခုအခါ ရုမ္မဒေးဟုခေါ်၍ အိန္ဒိယမြောက်ပိုင်း နယ်စပ်မှ ခြောက်မိုင်အကွာရှိ နီပေါနိုင်ငံထဲမှာ တည်ရှိပါတယ်..ကုလသမဂ္ဂ အတွင်းရေးမှူးချုပ် ဦးသန့်၏ အကျိုးဆောင်မှုကြောင့် စိမ်းစိုသာယာပြီး သန့်ရှင်းလှ ပတဲ့ လုမ္ဗိနီ ဖြစ်နေပါပြီ.. ခရစ် 1896 မှာ ကျောက်စာဝန် မစ္စတာ ကန်နင်ဟမ်က လုမ္ဗိနီကို ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ပြီး မယ်တော်မာယာသားဖွားမြင်ပုံရုပ်တုတွေ့ရှိရာ အုတ်တိုက်ရယ်၊ အမြင့် 13 ပေ6လက်မ၊ လုံးပတ်7ပေ3လက်မရှိတဲ့ အသောကကျောက်စာတိုင်ရယ်၊ရေပူရေအေး သုံးဆောင်ခဲ့တဲ့အထိမ်းအမှတ် ရေကန်ရယ်၊ အသော ကမင်း တည်ခဲ့တဲ့ ခြေခုနစ်လှမ်း လှမ်းခဲ့ရာစေတီ ခုနစ်ဆူအနက် လေးဆူကို ဖူးတွေ့နိုင်ပါသေးတယ်.. ပြီးတော့ ကပိလ၀တ်နန်းတော်ရာဟောင်း ၊ နိဂြောဓာရုံကျောင်းနဲ့ ရောဟိနီ မြစ်နေရာတွေကိုလည်း သမိုင်းမှာ အငြင်း ပွားဆဲဖြစ်နေသေးပေမယ့် ရာဟုလာတို့ နန္ဒမင်းသားတို့ ကိုတော့ အောက်မေ့တသ သတိတရဖြစ်နေဦးမယ့် နေရာတွေပါပဲ..
B.C 588 May မှာ ဘုရားပွင့်ခဲ့တဲ့ ဗောဓိပင်ကို အသောကမင်းရဲ့မိဖုရားငယ် တိဿရက္ခာ ကစ်ခါ၊ သျီဝဘုရင် ဆာဆင်္ကာ က နှစ်ခါ၊ ခရစ် 1193 မှာ မွတ်စလင် စစ်ဗိုလ်ချုပ် မိုဟာမက်ဂိုရီက တစ်ခါဖျက်ဆီးခဲ့ပြီး ခရစ် 1876 မှာ လေမုန် တိုင်းကြောင့်လဲကျသွားတဲ့ဗောဓိပင်ရဲ့မျိုးဆက်ကို ဟိန္ဒူဘုန်းကြီး မဟန့်ဂီရိ (သို့) ကျောက်စာဝန် မစ္စတာ ကန် နင်ဟန်က လက်ရှိဗောဓိပင်ကို ပြန်လည်စိုက်ပျိုးထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်.. ဘာပဲဖြစ်ခဲ့စေဗောဓိပင်ပေါက်ရာမြေနေရာဟာဒီစကြ၀ဠာမှာပထမဆုံးပေါ်ထွန်းခဲ့တဲ့မြေနေရာ၊ပရိက္ခရာငါးစုံပါတဲ့ ကြာပင်ပေါက်ခဲ့တဲ့မြေနေရာ၊ဘုရားငါးဆူဗုဒ္ဓ္ဓ္ဓဖြစ်မယ့်မြေနေရာ၊မာန်းငါးပါးအောင်ရာဌာနဖြစ်တဲ့ဗောဓိပင်နဲ့ရွှေပလ္လင်ကို အလေးဂရုပြုတဲ့အနေနဲ့ ဘုရားရှင်ကိုယ်တိုင်မမှိတ်သောမျက်စိနဲ့ ခုနစ်ရက်လုံးလုံးမတ်မတ်ရပ် ကြည့်ရှုခဲ့ပြီး ဘုရားရှင်ရဲ့အသုံးအဆောင် ပရိဘောဂစေတီထိုက်တဲ့မြေနေရာပါ.. သာသနာကွယ်ချိန်ရောက်ရင် ရှိရှိသမျှဓာတ်တော်တွေဗောဓိပင်အောက်မှာစုဝေးပြီး နိမ္မိတရုပ်ပွားတော်အဖြစ် နောက်ဆုံးတရားဟောကြားကာ ဓာတုပရိနိဗ္ဗာန်စံဝင်မယ့်မြေနေရာပါ.. အဲဒီအချိန်မှာ ဒီနေရာဟာ လူသူမရောက်နိုင်တဲ့ဒေသဖြစ်နေလို့ လူသားများနာကြားခွင့်မရတော့ဘဲ နတ်ဗြဟ္မာများသာ နားကြားခွင့်ရမယ့် တရားပွဲပါ..
ပိဋကတ်စာပေနဲ့ယှဉ်ကြည့်ရင် လက်ရှိ မုဉ္စလိန္ဒာသတ္တာဟနေရာဟာနီးလွန်းနေပေမယ့် ရာဇာယတန သတ္တာဟနေရာကတော့ မြန်မာပြည်သားတွေအတွက် အားတက် ဂုဏ်ယူဖွယ်ကောင်းလှပါတယ်.. မြတ်ဗုဒ္ဓ္ဓ္ဓ ကို ပထမဆုံး မုန့်ဆွမ်းကပ်ခွင့်ရတဲ့နေရာ၊ ပထမဆုံး ဒွေဝါစိကသရဏဂုံ (ဗုဒ္ဓ္ဓ္ဓ ဓမ္မ)ဆောက်တည်ခွင့်ရတဲ့နေရာ၊ ပထ မဆုံးဗုဒ္ဓ္ဓ္ဓဘာသာဝင်ပေါ်ထွန်းခဲ့တဲ့နေရာ၊ပထမဆုံးဓာတ်တော် ဆံတော်ရှစ်ဆူပူဇော်ခွင့်ရရှိခဲ့တဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်.
တပုဿ နဲ့ ဘလ္လိက တို့ကို မြန်မာပြည်သားတွေ မဟုတ်ဘူးလို့ ဆိုစေဦးတော့ သူတို့ပင့်ဆောင်ခဲ့တဲ့ ဆံတော် တွေကတော့ မြန်မာပြည်မှာရှိနေတယ်ဆိုတာ ယနေ့ ကမ္ဘာ့အံချီးဖွယ် ရွှေတိဂုံစေတီတော်မြတ်က အထင်ကရ သက်သေပါ..
ဗောဓိပင်ရဲ့အရှေ့ဘက်မှာအသောကမင်းကောင်းမှုထီးတော်အပါအ၀င်ဉာဏ်တော်ပေ 180 .. ဖိနပ်
တော် 48 ပေ ရှိတဲ့ လေးထောင့်ပုံ မဟာ ဗောဓိစေတီတော်ကြီးကိုဖူးမြင်နိုင်ပါတယ်.. အသောကမင်းတည်ခဲ့သမျှ လေးထောင့်ပုံစံစေတီတော်ဟာ ဒီတစ် ဆူတည်းရှိလို့ အဲဒီအချိန်တုန်းက အသောကမင်းဟာ ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်ပေမယ့် ဂျိန်းအငွေ့အသက်မကုန်သေးဘူး လို့ ပညာရှင်များမှတ်ချက်ချတာကိုလည်း မှုတ်သားဖူးပါတယ်.. ခရစ်2ရာစုမှာ မဂဓဘုရင်တစ်ပါးက လက်ရှိပုံစံ ဖြစ်အောင်ပြုပြင်ခဲ့ပြီး မြန်မာသက္ကရာဇ် ၁၂၃၉ မှာ မင်းတုန်းမင်းကြီးကထပ်မံပြုပြင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်..စေတီရံ လေးဆူဟာ မင်းတုန်းမင်းရဲ့ကုသိုလ်လို့ သမိုင်းမှတ်တမ်းရှိပါတယ်..စေတီတော်အတွင်းမှာ ဂုတ္တခေတ်လက်ရာ ဉာဏ်တော် 10 ပေခန့်ရှိတဲ့ ဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်မြတ်ကိုဖူးတွေ့နိုင်ပြီး ဘုရားရှင် ဗောဓိပင်အောက်မှာ သီတင်းသုံး စဉ်က ထိုင်တော်မူသွားတဲ့ အပရာဇိတပလ္လင်နေရာလည်းဖြစ်ပါတယ်.. ရုပ်ပွားတော်မြတ်ရဲ့ရှေ့နားလေးမှာ တွင်း ငယ်တစ်ခုရှိပြီး အရင်က ဟိန္ဒူတွေကိုးကွယ်တဲ့ သျှီဝလိင်ပုံကျောက်ရုပ်ကြီးရှိတဲ့နေရာဖြစ်ခဲ့ပြီး လွတ်လပ် ရေးရပြီးမှ ဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံများရဲ့တောင်းဆိုချက်အရ ဖယ်ရှားပေးခဲ့တဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်.. အထက်ပစ္စယံက ရုပ်ပွားတော်မြတ်ကိုတော့ တက်ရောက်ဖူးမျှော်ခွင့် ပိတ်ထားခဲ့တာ ကြာပါပြီ…
ဥရုဝေလတောတန်းနဲ့ ဒုက္ကရစရိယစခန်းလှိုဏ်ဂူ၊ ဃနာနို့ဆွမ်းကပ်ခဲ့တဲ့ သုဇာတာညောင်ပင်တန်းဟာ လွမ်းမောစရာကောင်းလှပေမယ့် ရွှေခွက်မျှောခဲ့ရာ နေရဉ္ဖ္ဗ္ဇရာကတော့ ကော ခဲ့ပါပြီ. အနာဂါရိက ဓမ္မပါလလက်ထက် အမှုဖြစ်တုန်းက သီပေါမင်းကိုယ်တိုင် ခမည်းတော်ဆောက်ထားတဲ့ဇရပ်ဖြစ်ကြောင်း အထောက်အထားခိုင်လုံစွာနဲ့အကောင်းဆုံးသက်သေလိုက်ခဲ့ပေမယ့် မဟန့်သာပိုင်စေလို့ဆုံးဖြတ်ခံခဲ့ရတဲ့ မင်းတုန်းဇရပ်ကြီးကတော့ သူတို့တွေရဲ့ နွားမွေး ဆိတ်မွေးရာဌာနဖြစ်ခဲ့ရပြီး ကောင်းမှုရှင် ကျောက်စာတိုက်နှစ်ခုကလည်း တောခြုံအုံကြား ချောက်ကြား မြောင်းကြားရောက်သွားခဲ့ရပါပြီ.. ဒါတွေဟာလူမျိုးကွဲခြင်းက အခြေခံ အကြောင်းရင်းဖြစ်သလို ဘာသာခြားခြင်းကလည်း အဓိက အရေးပါလှပါတယ်..
ဗာရာဏသီမြို့နဲ့ 8 ကီကိုမီတာအဝေးမှာ မိဂဒါဝုန်တောရှိပြီး သီဟိုဠ်သား သူတော်စင် အနာဂါရိက ဓမ္မ ပါလ ရဲ့ အကျိုးဆောင်မှုကြောင့် မိဂဒါဝုန်ဟာ ကျယ်ကျယ်ဝန်းဝန်းနဲ့သာသာယာယာရှိလှပါတယ်.. ဗုဒ္ဓဂါယာမှာ ဘုရားရတနာပေါ်ထွန်းခဲ့ပြီး မိဂဒါဝုန်မှာ တရားရတနာနဲ့သံဃာရတနာပေါ်ထွန်းခဲ့ပါတယ်.. အသောကမင်း တည်ထားကိုးကွယ်ခဲ့တယ်လို့ ယူဆရတဲ့ တရားဦး ဓမ္မစကြာဟောကြားရာ ဓမ္မရာဇိက စေတီကြီးကတော့ ခရစ် 1794 မှာ ဖြိုချခံခဲ့ရလို့ ဉာဏ်တော်သုံးပေလောက်သာကြွင်းကျန်ခဲ့ပေမယ့် အနတ္တလက္ခဏသုတ်ဟောကြားရာ ဓမ္မေခ စေတီတော်ကြီးကတော့ ဉာဏ်တော် 104 ပေအမြင့်နဲ့ ဖူးတွေ့နိုင်ပါသေးတယ်..
မိဂဒါဝုန်တောနေရာဟာ ပထမဆုံး နတ်ဗြဟ္မာတွေ ကုဋေနဲ့ချီပြီး တရားထူးရခဲ့တဲ့နေရာ.. အတိတ်ဘ၀တွေတုန်း က အရင်ဆုံး အစောဆုံး ပထမဆုံး ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကို ပြုခဲ့ဖူးတဲ့ အရှင်ကောဏ္ဍည ပထမဆုံး တရားထူး ရခဲ့တဲ့နေရာဖြစ်လို့ လူသားတွေအနေနဲ့လည်း ပထမဆုံး တရားထူးရခဲ့တဲ့နေရာ.. အနတ္တလက္ခဏသုတ်ဟော ကြားအပြီးမှာ ပဉ္စ၀ဂ္ဂီငါးပါးလုံး ရဟန္တာဖြစ်ခဲ့လို့ ရဟန္တာစတင်ပေါ်ထွန်းခဲ့တဲ့နေရာလည်းဖြစ်ပါတယ်.. ဘုရားရှင် မိဂဒါဝုန်မှာ တစ်ဝါဆိုစဉ်အတွင်း ယသသူဌေးသားနဲ့သူငယ်ချင်း 54 ယောက် ရဟန္တာတွေဖြစ်ခဲ့ကြပြီး မိသားစုဝင် တွေလည်း တရားထူးတွေ ရရှိတော်မူခဲ့ပါတယ်.. ၀ါက္ဈတ်တဲ့အခါ ရဟန္တာ အပါး 60 ကို သာသနာပြုခရီးစတင်လွှတ်ခဲ့လို့ မိဂဒါဝုန်တောနေရာဟာ သာသနာပြု ဗဟိုဌာနချုပ်နေရာလည်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်.. နောင်ပွင့်မည့် အရိမေတ္တေယျ ဘုရားရှင်ဟာ ဗာရာဏသီမှာ ဖွားမြင်မှာဖြစ်လို့ ဗာရာဏသီမြို့ဟာ အဲဒီအချိန်မှာ ကေတုမတီမြို့ဆိုတဲ့အမည်နဲ့ ဘုရားလောင်းဖွားမြင်ရာနေရာ နဲ့ တရားဦး ဓမ္မစကြာ ဟောကြားရာနေရာအဖြစ် ပြန်လည်လှုပ်ရှား အသက်ဝင်နေဦးမှာပါ….
မဟာသက္ကရာဇ် ၁၄၈ ခု ကဆုန်လပြည့် အင်္ဂါနေ့ (B.C 543 May) မှာ ဘုရားရှင်ဟာ ကုသိနာရုံမှာ ပရိနိ ဗ္ဗာန်စံတော်မူခဲ့ပါတယ်.. ကုသိနာရုံဟာ ရှေးရှေးတုန်းက ကုသ၀တီနေပြည်တော်ကြီးဖြစ်ခဲ့ဖူးပြီး ဘုရားလောင်း ကလည်း စကြ၀တေးမင်း ၇ ကြိမ်ဖြစ်ခဲ့ဖူးပါတယ်.. ဒါ့ကြောင့် ဘုရားရှင်အနေဖြင့် ကုသိနာရုံမှာ ခန္ဓာကိုယ်ချ ခြင်းသည် ၈ ကြိမ်မြောက်ဖြစ်ပြီး စကြ၀တေးမင်းစည်းစိမ်လည်း မမြဲကြောင်းကိုပြထားတဲ့ မဟာသုဒဿနသုတ် ကို ဟောကြားတော်မူလိုတာကြောင့်ရယ်.. နောက်ဆုံး သာဝက သုဘဒ္ဒ ကို တရားထူးရစေချင်တာကြောင့်ရယ်
စံတော်မူပြီးလို့ ကြွင်းကျန်ရစ်တဲ့ သရီရ ဓာတ်တော်တွေကို ဒေါဏပုဏ္ဏားက ငြိမ်းချမ်းစွာ ခွဲဝေပေးနိုင်ကြောင်း မြင်တော်မူတာရယ်ကြောင့် ကုသိနာရုံမှာ စံတော်မူခြင်းဖြစ်ပါတယ်.. မြောက်အရပ်သို့ ဦးခေါင်းပြု၍စံတော်မူခြင်းမှာ လာရောက်ဖူးမျှော်သူပရိသတ်များအတွက် မြောက်အရပ်သို့ ဦးခေါင်းပြု၍ ဖူးမျှော်အပုဇော်ခံခြင်းငှာ သင့်လျော် လျောက်ပတ်သောကြောင့်သာ ဖြစ်တယ်လို့ စာပေ ဆိုပါတယ်..
ကုသိနာရုံမှာ ရေကြည်တော်သုံးရာဌာနရယ် မဟာပရိနိဗ္ဗာနစေတီရယ်.. တေဇောဓာတ်လောင်ကျွမ်း ရာ အင်္ဂါရစေတီရယ်ကို ဖူးမျှော်နိုင်ပါတယ်.. မဟာပရိနိဗ္ဗာနစေတီတော်ကြီးရဲ့ မူလဒါယကာကို မသိရှိရသေးပေမယ့် လျောင်းတော်မူရုပ်ပွားတော်မြတ်ကိုတော့ အေဒီ ၅ ရာစုမှာ မထုရာမြို့မှ ဗိသုကာ ဒိန က ထုလုပ်ခဲ့ပြီး ဟရိဗလ ဆွာမိ က လှူဒါန်းခဲ့ကြောင်းဆိုပါတယ်..ခရစ် 1833 မှာ ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ပြီး ပေ 20 လောက်ရှိမယ်လို့ ခန့်မှန်းမိပါ တယ်…
ဖွား ပွင့် ဟော စံ ဆိုတာ သံဝေဇနိယလေးဌာနဖြစ်ပြီး ပွင့် ဟော မြဲနေ ဆင်းနတ်ပြည် ဆိုတာကတော့
ဘုရားရှင်တိုင်း မစွန့်တဲ့ အ၀ိဇဟိတ လေးဌာနပါ ..သာဝတ္ထိမြို့ ဇေတ၀န်ကျောင်း ဂန္ဓကုဋိ တိုက် ထဲက ဘုရားရှင်ကျိန်းစက်ရာ ကုတင်ခြေလေးချောင်းနေရာဟာ အ၀ိဇဟိတဌာနတစ်ခုပါ..ဇေတ၀န် အ၀င်မှာ အာနန္ဒာ ဗောဓိကို ဖူးတွေ့နိုင်ပါတယ်.. သစ်ပင်တစ်ပင်ဟာ နှစ် 2500 ကျော်အသက်ရှည်နိုင်ပါ့မလားဆိုတဲ့ ဒကာတစ် ယောက်ရဲ့အမေးကို လောကနိယာမ နဲ့ ဓမ္မနိယာမ ကိုမနှိုင်းယှဉ်အပ်ကြောင်း.. တချို့ကိစ္စတွေမှာ ယုံကြည်မှု မယုံကြည်မှုတွေကြောင့် ကုသိုလ်ရတာရှိသလို မရတာလည်းရှိကြောင်း .. ကုသိုလ်မရတာ ကိစ္စမရှိပေမယ့် အကုသိုလ်ရသွားရင်တော့ ကိစ္စရှိသွားပြီးဖြစ်ကြောင်း အာနန္ဒာဗောဓိအောက်မှာ နိယာမတရားငါးပါးအကြောင်း
ဘုရားရှင်ဟာ အနာထပိဏ်ရဲ့ဇေတ၀န်မှာ ၁၉ ၀ါ၊ ၀ိသာခါ ရဲ့ပုဗ္ဗာရုံ မှာ ၆ ၀ါ နဲ့ သာဝတ္တိမှာ၂၅ ၀ါ သီတင်သုံးခဲ့ပါတယ်.. ဇေတ၀န်ကို သွားရောက်ဖူးမျှော်နိုင်ပေမယ့် ပုဗ္ဗာရုံကတော့ အစိရ၀တီမြစ်အောက်ရောက် သွားသလိုလို ဟိုနားလိုလို ဒီနားလိုလို အဆင့်မှာပဲရှိပါသေးတယ်.. ဒါပေမယ့် ထိုင်း ဒေါက်တာ သီလရှင် ရဲ့ ခေတ်သစ်ဝိသာခါကျောင်းတိုက်ကတော့ နာမည်နဲ့လိုက်ပါပေရဲ့… သာဝတ္ထိမှာ ဒေ၀ဒတ် နဲ့ စိဉ္စမာနတို့ မြေမျိုတာ သူ့ထိုက်နဲ့သူ့ကံမို့ ၀မ်းနည်းစရာမကောင်းလှပေမယ့် ဘုရားရှင်နဲ့သက်တူရွယ်တူ ကောသလမင်း ကြီး ဘာတရားထူးမှရမသွားတာကတော့ ၀မ်းနည်းစရာကောင်းလှပါတယ်.. ဒါကလည်း ပါရမီနည်းခဲ့တဲ့ သူ့ထိုက်နဲ့သူ့ကံပါပဲလေ.. ဗိမ္ဗိသာရတို့များ ဘုရားလောင်းဘ၀ကတည်းက ရိုရိုကျိုးကျိုးလေးလေးစားစားနဲ့ သူ တော်ကောင်းမှန်းအကဲခပ်တတ်ခဲ့တယ်.. ဒါတောင် ဘုရားလောင်းထက် ၅ နှစ်ငယ်ပါတယ်.. ကောသလတို့ များ ဘုရားရှင်အစစ်ကြီးနဲ့တွေ့နေတာတောင် ဘုရားဟုတ်မှဟုတ်ရဲ့လား လုပ်သေးတာကိုး…
မြတ်ဗုဒ္ဓ ငါးဝါအရမှာ ခမည်းတော် သုဒ္ဓေါဒနမင်းကြီးဟာ ထီးဖြူအောက်မှာပဲ လူဝတ်ကြောင်ဘ၀နဲ့ ရဟန္တာဖြစ်ကာ သက်တော် ၉၀ ကျော်မှာ ပရိနိဗ္ဗာန်စံတော်မူပါတယ်.. ဘုရားရှင် ၇ ၀ါအရမှာ ပုထုဇဉ်အဖြစ်နဲ့ သာရှိနေသေးတဲ့မယ်တော်နတ်သားကို တာဝတိံသာနတ်ပြည်မှာ ၀ါတွင်းသုံးလလုံး အဘိဓမ္မာတရားဟောကြား ကာ သောတာပန်တည်စေပြီး သီတင်းကျွတ်လပြည့်နေ့မှာ အရှင်သာရိပုတ္တရာ သီတင်းသုံးနေတဲ့သင်္ကဿနဂိုရ်
မြို့ကို ကြီးကျယ်ခမ်းနားစွာနဲ့ပြန်လည်ဆင်းသက်လာတဲ့အခါမှာ ဘုရားအသရေတော်ဟာတင့်တယ်လွန်းလို့ ဘု ရားဆု မပန်သူမရှိဘူးလို့ဆိုပါတယ်.. နတ်တွေကိုမြင်ရတဲ့ထိုပွဲမှာ ဘုရားရှင်ညာခြေတော်ချခဲ့နေရာကို အသော ကဘုရင်က အစလစေတီတည်ထားခဲ့ပေမယ့် အခုတော့တောင်ကုန်းအဖြစ်ပဲကျန်ရှိပါတော့တယ်.. ဘေးနားမှာ အသောကကျောက်တိုင်ကိုတွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်.. နောက်ပြီးအရှင်သာရိပုတ္တရာကျောင်းတော်ရာနေရာကိုခပ် လှမ်းလှမ်းမှာတွေ့မြင်နိုင်ပြီး တူးဖော်ခြင်းမပြုရသေးပါဘူး..
အသောကမင်းရဲ့ပါဋလိပုတ်… လိစ္ဆ၀ီတို့ရဲ့ဝေသာလီတို့ကို လွမ်းမောစွာပြန်လည်မြင်တွေ့နိုင်သလို ပေး၍မကုန် လှူ၍မခန်း တဲ့ အမိတဘောဂသူဌေးကြီးများပေါ်ထွန်းရာ ရာဇဂြိုလ်ကလည်း တောင်ငါးလုံးအောက် မှာ လေ့လာကြည့်ရှုစရာတွေတပုံတပင်နဲ့သက်ဝင်လှပနေဆဲပါ.. ခရစ် 427 မှာ စတင်ပေါ်ထွန်းခဲ့ပြီး 1197 မှာ မွတ်ဆလင်တို့လက်ချက်နဲ့ပျက်စီးခဲ့ရတဲ့ အရှင်နာဂဇုနတည်ထောင်ခဲ့တဲ့ကမ္ဘာ့အစောဆုံးတက္ကသိုလ် နာလန္ဒာကိုလည်း သမိုင်းရုပ်ကြွင်းအဖြစ်တွေ့မြင်နိုင်ပြီး ဒီနယ်သားတွေဖြစ်တဲ့ အရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့ အရှင်မောဂ္ဂလာန်တို့ကို တသ သ သတိရစေမယ့်နေရာတွေပါ.. ရာဇဂြိုလ်မြို့မှာ ပထမဆုံး ကျောင်းဖြစ်တဲ့ ဝေဠုဝန်ကျောင်းတော်ပေါ်ထွန်းခဲ့ပြီးပထမဆုံးသင်္ဂါယနာတင်ရာသတ္တပဏ္ဏိလှိုဏ်ဂူကိုလည်းတွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်..ဗိမ္ဗိသာရ.. ဇီဝက.. အဇာတသတ် နဲ့ ဒေ၀ဒတ်တို့ကိုလည်း ၀မ်းသာဝမ်းနည်း ပြန်လည်သတိရစေမယ့်နေရာတွေဖြစ်ပါတယ်.. ဒေ၀ဒတ်တို့ အဇာတသတ်တို့ ဘယ်လိုပင်ဆိုးခဲ့သည်ဆိုစေဦး သူတို့တွေက တစ်ချိန်မှာ ပစ္စေကဗုဒ္ဓတွေအဖြစ်နဲ့ကျိန်းသေကျွတ် တမ်းဝင်မယ့်ပုဂ္ဂိုလ်တွေပါ.. သူတို့ကို လူဆိုးကြီးတွေအဖြစ်ရှုမြင်နေကြတဲ့ငါတို့ကတော့ ဘယ်တော့များမှာမှ ကျွတ်တမ်းဝင်ကြမှာလဲလို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်မေးရင်း သံဝေဂရနေပါတော့တယ်……။ ဒီဆောင်းပါးနဲ့ပါတ်သက်ပြီးမေးမြန်းသမျှကိုစိတ်ရှည်စွာနဲ့ အကြံဥာဏ်ပေးသော သူငယ်ချင်း အရှင်ဝိစိတ္တ(ဓမ္မာစရိယ) MA ကို အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ စာဖတ်ပရိတ်သက်များလဲ ဒီဆောင်းပါးနှင့်ပါတ်သက်ပြီး ဓမ္မသဘောတရားလေးများ မသိတာ မရှင်းတာရှိခဲ့ရင် အပြုသဘောဆာင်ပြီး ဆွေးနွေးနိုင်ပါကြောင်း ပြောကြားလိုပါတယ်။
အရှင်ကေလာသ(သာစည်) MA မဂဓ တက္ကသိုလ်။